इमेल नम्बर—दुई - शखदा साहित्य
12:40 AM कथा
सुमधुर प्रेम !
लामो समयसम्म तिम्रो मेलको प्रतिउत्तर दिन पाइनँ । त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु । हो मलाई थाहा छ मैले छोडेर हिँडेपछि अवश्य तिमीलाई ठूलो आघात परेको हुनसक्छ तर म यता पूरै परिस्थितिको दास भएँ । यस थोरै समयमा मेरो जीवनमा सोच्तै नसोचको घटनाहरू घट्दै गयो । एकपछि अर्को घटनाको जालोमा म बाँधिँदै गएँ । मलाई थाहा छ तिमीले मलाई शरीर होइन आत्माले प्रेम गरेकी थियौ । म तिम्रो त्यो आत्मालाई पूजा गर्दथेँ र अझै पनि गर्दछु । तिम्रो माया हृदयमा सँगालेर राखेको थिएँ । तिमीजस्ती सुन्दरी र धनाढ्य युवतीको लागि जोसुकै युवापुरुष जुनसुकै वाचाकसम खान पछि पर्दैनन् भने म के कम हुन्थेँ होला । अझ तिमीले मलाई सबै समर्पण गरेकी थियौ । मैले तिमीलाई पाउनुलाई मेरो जीवनको ठूलो उपलब्धि ठानेको थिएँ । यता आएर बारम्बार तिमीसँग सम्पर्क राख्ने कोसिस गरेँ तर असफल भइरहँे । म यस्तो एउटा परिवेशको दास थिएँ कि म केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । त्यो परिवेशको जालोबाट उम्कन मलाई निकै हम्मे–हम्मे परिरहेको थियो ।
तिमीलाई थाहा छँदै थियो, मुम्बईमा हुँदै मेरा बुबाले एकजना साथीसँग व्यापारमा पार्टनरसीप बनेका थिए । त्यो व्यापारमा लगाएको सेयर पन्ध्र वर्षपछि मात्र बाँड्ने सम्झौता गरिएको थियो । सोही सेयर लिन म मुम्बईस्थित मेरा बुबाको साथीको घर गए । उनले मेरो राम्रै स्वागत गरे । साथीको छोरा भनेर आफ्नै व्यापारमा जागिर मिलाइइदिने कुरा गरे । उनले राम्रै तलबस्केल दिन्छु भनेका हुनाले मैले नाइँ भन्न सकिनँ । केही महिना जागिर खाएर अनुभव लिएर आफ्नो सेयर लिएर काठमाडौँ फर्कने सोचाइमा थिएँ म । तर समयले मसँग अनेकौँ खेल खेल्ने चाल चलिरहेको रहेछ । भन्नौँ ती बुबाका पार्टनरले यसरी मलाई जागिरमा लगाउनुको तात्पर्य अर्कै रहेछ । बिस्तारै रहस्य खुल्दै जान थाल्यो । उनको एउटै मात्र छोरी थिइन् । ती नराम्री भन्न नमिल्ने र त्यति धेरै राम्री पनि थिइनन् । ती सामान्य प्रकारकी थिइनँ । तर उनीसँग मेरो केमेस्टी मिलिरहेको थिएन । किनकिन उनी मसँग त्यही राम्ररी खुलेर बोल्दिनथिन् । मसँग टर्रो व्यवहार गर्थिन् । यसको रहस्य मैले बुझ्न सकिरहेको थिइनँ । तिनको नाम सङ्गीता थियो ।
एकदिन सङ्गीताको जन्मदिन थियो । घरमा जन्मदिनको लागि ससानो पार्टी राखिएको थियो । त्यस पार्टीमा अचानक बुबाका ती पार्टनर अर्थात् सङ्गीताका बुबाले मेरो हुनेवाला जुवाइ भनेर मलाई सबैसँग चिनाए । म आश्चर्यको गहिरो धरातलमा पछारिएँ । उनले किन यसो भने भनेर । मैले त्यहाँ कुनै प्रतिवाद गर्न उचित ठानिनँ किनकि मैले ऊसँग मेरा पार्टनरसिपको हिसाब लिनु थियो । त्यो पैसा नदिने सम्भावना उत्तिकै रहन्थ्यो । यो कुराले उनकी छोरी पनि खुसी थिइनन् । हामी बाहिरी देखावटी पाहुनाहरूको सामुन्ने हाँस्न बाध्य थियौँ । वास्तवमा जीवनमा कस्ताकस्ता सोच्तै नसोचेका घटना हँुदा रहेछन् र हामीले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्न अनेकौँ नाटक गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ आएर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवसर पाइरहेको थिएँ । पार्टी सकिएर सब पाहुना घर गएपछि मैले मेरो हुनेवाला ससुरालाई झाप्पु झार्ने सोच बनाएँ ।
म उनीसँग पड्किएँ –“तपाईंले यस्तो नचाहिँदो कुरा किन गर्नुभएको अंकल ?” मैले पार्टीमा अलि–अलि सुरापान पनि गरेको थिएँ र फिल्मी शैलीमा बूढाको सातो लिने पाराले धम्की दिएँ । बूढाले पनि अलि–अलि सोमरस तानेका थिए । उसले पनि आफ्नो राजकुमारको फिल्मी डायलमा आफ्नो युवाजोश निकाल्यो । उसले र मेरा बुबाले सानैमा सम्धीसम्धी बन्ने भनेर वाचा गरेका रहेछन् र उसको छोरीसँग विवाह नगरी पार्टनरसिपको हिसाब नदिने घोषणा ग¥यो । यसरी हामी दुईको चर्काचर्की प¥यो । तर म व्यवहार आफू तल परेको मानिस थिएँ । मैले ऊसँग कुनै किसिमको रिसइबी लिनु भनेको मेरो पैसा गुमाउनुथियो । मैले आपूmमा भएको सबै विवेक प्रयोग गर्ने विचार खियाएँ । अब मैले बुद्धिले काम लिनुको विकल्प मसँग थिएन । म अझ षड्यन्त्रको जालोमा बुनिँदै जाँदै थिएँ । तिम्रो सम्झनाले मेरो हृदयमा घरीघरी भुइँचालो ल्याएकोजस्तो हुन्थ्यो । तिमीसँग बिताएको पलमा म आफ्नो सम्झनाको क्षणमा बहुलाहाजस्तो हुन्थेँ । कहिलेकाहीँ समुद्रको किनारामा गई एक्लै केके सोच्दै हिँड्थे । अन्त्यमा मैले बूढाको कुरामा बुद्धि पु¥याएर सम्झौता गर्ने विवेक निकालेँ । मैले उनको छोरीसँग हाम्रो सम्बन्धबाट ऊ राजी छे कि छैन बुझ्ने विचार गरँे । मैले उसलाई मेरो विषयमा सबै कुरा भनेँ । उसको पनि आफ्नो केटासाथी भएको कुरा बताई । तर बुबाले गर्दा जबरजस्ती मसँग विवाह गर्नुपर्ने बाध्यताले पिरोलिरहेकी रहिछे । हामी दुवैले विवाह गर्न राजी हुने र पछि बूढाले मेरो भागको हिसाब दिएपछि मुम्बई छोडेर काठमाडौँ आउने सल्लाह ग¥यौँ । यस कुरामा सङ्गीता राजी भई । म दिनपरदिन अनेकौँ अफिसको झमेलामा फस्दै गएँ । यो सब बूढाको नियोजित षड्यन्त्र रहेछ । मैले पछि थाहा पाएँ । ऊ चाहन्थ्यो म व्यापारमा पूरै भिजूँ र उसकी छोरीको हात समाएर उसको घरजुवाइँ भएर बसूँ । मलाई यो कुनै हालतमा मन्जुर थिएन । तर मैले पनि नाटक गरेको कुरा बूढालाई थाहा दिइन । मैले उसको छोरीलाई मन पराएको नाटक गरिरहेँ । सङ्गीताले पनि यसमा साथ दिइरही । एक महिना – दुई महिना गर्दै तीन महिना बित्यो । खाताबन्दीको बेला आउन लागेको थियो । अब बूढाले मलाई मेरो सेयरको रकम दिएर नेपाल पठाउने र नेपालबाट मैले बुबाआमालाई लिएर गएर उसको छोरीसँग विवाह गर्नुपर्ने थियो । यसअघि उसले दुईवटा प्रस्ताव राख्यो । त्यो के भने उसको छोरीसँग मगनी गर्नुपर्ने र गोवा घुम्न जानुपर्ने । यति गरेपछि पक्कै पनि मैले उसको छोरीलाई छोडेर हिँड्दिनँ भन्ने विश्वास हुन सक्थो, त्यसैले उसले यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो । उसले सबैकुरा नियोजितरुपमा गरिरहेको थियो । नभन्दै एकदिन थोरै मानिस बोलाएर हाम्रो मंगनी गराए बूढाले । भोलिपल्ट गोवाको बसको दुईवटा टिकट र होटल रिजर्भेसनको बुकिङ बिल बूढाले मेरो हातमा थमाइदिए । अब म माकुरोको जालोमा फसेको कीराझैँ सबै परिस्थितिबाट फस्दै गएँ । तर पनि सङ्गीता र ममा दह्रो सम्झौता भएको हुनाले हामीबीच विश्वासको पर्खाल ढल्दैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो । हामीले गोवा नगइ नहुने अवस्था थियो । होटलमा पुगेपछि हामीलाई अर्को एउटा अप्ठेरो अवस्था प¥यो त्यो के भने हामीलाई एउटै कोठामा टिकट बुक गराइएको रहेछ । तर पनि केही छैन अर्को रुममा हामी आफैँ पनि बुक गर्न सक्थ्यौँ । त्यसैले मैले अर्को सिगलवेड भएको रुम बुक गरँे र त्यही बस्ने विचार गरेँ । हामी दुवै सरसल्लाहमा आआफ्नो रुममा सुत्न गयौँ । थकाइले गर्दा होला मलाई चाँडै निद्राले छोपेछ । म गहिरो निद्रामा थिए । अचानक राति कसैले बाहिर जोडसँग ढोका ढकढकाइरहेको रहेछ । म तर्सिएँ । ढोका खोल्नेबित्तिकै सङ्गीता मलाई छाँद हालेर रुन आइपुगी । उसले मलाई जोडले अँगालोमा बेरी । मलाई यो सब अचम्म लाग्यो । म अन्यमयस्क बनेँ । यो सब के हो मैले बुझ्न सकिरहेको थिइनँ । बुबाले नाटक गर्थे अब छोरीको नाटक गर्ने पालो आएछ भन्ने सोचेँ । एकछिन त निकै झोक चल्यो । फेरि सङ्गीताको रुवाइले लाथ्दथ्यो ऊ निकै ठूलो सामस्या परेकी छे । मैले सर्वप्रथम के भएको हो त्यो बुझ्नुपर्ने विचार गरेँ । उसलाई मैले सान्त्वाना दिएर सामान्य बनाएँ । त्यसपछि सत्य कुरा के हो त्यो भन्न लगाएँ । एक गिलास पिउने पानी दिएपछि ऊ सामान्य बनी र भन्न लागी– “गौरव मेरो व्याइफ्रेन्डले मलाई मार्न कोही गुन्डा पठाएको छ रे । उसले सुपारी पनि लिईसकेको छ रे । त्यसैले मेरो ज्यान खतरामा छ तिमी नै मलाई बचाउन सक्छौ ।”
ऊ निकै नर्भस भएर यी सब भन्दै थिई । उसको कुरा अविश्वास गर्ने कुरै हुँदैनथ्यो । यति भन्नेबित्तिकै मैले परिवेशको जानकारी पाइहालँे । म पनि निकै त्रसिद बनेँ । मुम्वई र गोवाजस्तो ठाउँमा मान्छे मार्न कुनै गारो थिएन । उसको व्याइफ्रेन्डले हामी गोवा आएको थाहा पाएछ र उसले सङ्गीतालाई अविश्वास गरेको कुरा मलाई बुझ्न गारो भएन । त्यसपछि मैले सङ्गीतालाई भने– “तिमीले तिम्रो केटासाथीलाई राम्रोसँग सम्झाउनुपर्दथ्यो सङ्गीता । हेर कस्तो आपत आइप¥यो ।”
सङ्गीताले हिक्कहिक्क गर्दै भनी— “हो मैले उसलाई हाम्रो यो नाटक हो हामीले सम्झौता गरेका छौँ भनेकी थिएँ । तर उसले मलाई पूरै अविश्वास ग¥यो । तिम्रो बाध्यता पनि सुनाएकी थिएँ तर उसले त नेपाली केटालाई मन पराउँछेस् मलाई छोड्न तैँले मसँग नाटक गरेकी होस् । भनेर एकपल्ट धम्कायो । मैले उसको मिल्ने साथीमार्फत उसलाई सम्झाउन भनेकी थिएँ तर अहिले उसले मलाई मार्न नै गुन्डा पठाएको उक्त साथीले मलाई बतायो । ऊ यस्तो खराब चरित्रको होला, यस्तो व्यवहार गर्ला भनेर मैले कहिले सोचेकी थिइनँ । ऊ मलाई उसको ज्यान दिन परे पनि दिन्छु भन्थ्यो तर अहिले मेरो ज्यान लिनलाई यति आतुर होला भन्ने मैले सोचेकी नै थिइनँ । गौरव अब तिमी नै मलाई बचाउन सक्छौ अब मलाई कसैले बचाउन सक्दैन । मजस्तो आपतमा परेकी महिलालाई बचायौ भने तिमीलाई ठूलो धर्म हुनेछ गौरव ।” अनुनय–विनयका साथ सङ्गीताले गरेकी यो बिलौनाले मेरो मन पग्लियो । म बिस्तारै सङ्गीताको कुरामा विश्वास गर्न थालेँ । यो समय मसँग भएको सम्पूर्ण बुद्धिविवेक खर्च गर्ने समय आएको थियो । सङ्गीतालाई मैले उसको कोठामा लिएर गए किनकि मेरो काठा सिगलवेडको थियो । उसकोमा डबलवेडको थियो । ऊ मलाई एकछिन पनि छोड्न मानेकी थिइन् । आफ्नै छायाँसँग पनि डराएको हो कि झँै गर्दथी । अब के गर्ने म ठूलो समस्यामा परेँ । एकमन लाग्यो भागेर काठमाडौ फर्कूँ तर फेरि मेरो पार्टनरसीपको पैसा नलिई फर्कने मेरो कुरै हुँदैनथ्यो । छोरामान्छेमा यस्तो बेलामा ठूलो साहस गर्ने शक्ति ईश्वरले दिएको हुन्छ किनकि यस्ता केही सामान्य घटनालाई मैले राम्ररी बेहोरि सकेको छु । तिमीहरूलाई रेडलाइट एरियामा गुन्डालाई धपाउनेदेखि लिएर केही यस्तै घटना मैले जीवनमा बेहोरिसकेको हुनाले म यस्तो अवस्थामा कहिल्यै विचलित हुने गर्दिनँ । मलाई लाग्छ पुरुष र महिलामा यस्तै कुराको फरक छ । महिला समस्या पर्दा छिटै आत्तिने–कराउने गर्दछन् तर पुरुषहरू त्यसलाई साहसका साथ डटेर जुध्ने शक्ति आफूमा पैदा गर्छन् र सफल पनि हुन्छन् । मैले पनि यो अवस्थामा आफूमा ठूलो शक्ति पैदा गरेँ र सङ्गीतालाई सकुशल घर पु¥याएर सबै कुरा उसको बुबासँग गर्ने सोच बनाएँ ।
अब मैले सङ्गीतालाई छोड्ने अवस्था थिएन । ऊ मलाई हरदम हात समाइरहन्थी र डराइरहन्थी । उसले खाना खान जान पनि मानिन् । मैले नै कोठामा खाना मगाएर खुवाएँ र आफू पनि खाएँ । उसले मोबाइलको स्वीच अफ गरेकी थिइ डरले । एकछिनपछि मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो । उताबाट उसको बुबाले गरेको रहेछ । उसले सङ्गीताको मोबाइल किन स्वीच अफ छ भनेर सुरुमै भन्यो र सङ्गीतासँग बोल्ने कुरा ग¥यो । मैले सङ्गीता बाथरुम गएकी छ भनेर ढाँटेँ र आफूहरू सकुशल होटलमा रहेको कुरा बताएँ ।
अब सङ्गीता निकै सामान्य बनेकी थिई । मैले उसलाई निकै काउन्सिल गरेँ र सामान्य बनाएको थिएँ । ऊ मेरो कुरामा विश्वस्त भए पनि कोठामा एक्लै सुत्न नसक्ने कुरा बताई । अब म सङ्गीतासँगै कोठामा सुत्नुपर्ने भयो । एउटै कोठामा दुई युवा धडकन कसरी सुत्न सक्छन् तिमी अनुमान लगाउन सक्छौ ? तर पनि मैले तिम्रो प्रेमको खातिर आफूलाई संयम बनाइराखेँ । सङ्गीता घरी–घरी डरले मलाई अँगालो मार्न आइपुग्थी । म उसको हात पन्छाउँथेँ । त्यो रात धेरै मुस्किलले मैले बिताएँ । भनौँ रात अनिँदो बितेको थियो । सङ्गीता त अझ डरले रातभर केके भन्दै बहुलाउँथी । म पनि झस्कन्थेँ । यसरी त्यो रात बित्यो । रात त बित्यो अब दिन कसरी बिताउने ? दिन ठूलो पहाड बनेर तेर्सियो हाम्रो अगाडि । अब कोठा छोडेर बाहिर जानु खतरा हुन्थ्यो । गुन्डाहरूले होटलबाहिर अझ तुरुन्त आक्रमण गर्ने सम्भावना भएकोले हामी होटलको लवीतिर दिन बिताउन थाल्यौँ । सङ्गीता मसँगबाट एकछिन छुट्टिन मान्दिनथी । हरदम मेरो हात समाइरहन्थी र पछुतो मानिरहन्थी । दिनभर कोठामा टिभी हेरेर समय बितायौँ ।
साँझ पर्न लाग्यो होटलको कोठामा घन्टी बज्यो । मैले रिसिभर उठाएँ । उताबाट अपरिचित व्यक्तिले मलाई हिन्दी भाषामा निकै धम्काउँदै भन्यो— “सङ्गीता खोई । तिमीहरू दुवै अब मेरो हातबाट बच्दैनस् । चाँडै तिमीहरूको काल आउँदैछ ।” म पनि फोनमा निकै जङ्गिएँ । सङ्गीता यो सब सुनिरहेकी थिई । ऊ अझ डरले नर्भस बनेकी थिई । यति भनेर मैले फोन राखिदिएँ । यो अपरिचित ठाउँमा के गर्ने के नगर्ने मैले केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ । अब मेरो पनि जीवन निकै धरापमा रहेको महसुस हुन थाल्यो मलाई । तै पनि होटलभित्र त गुन्डाहरूले हामीलाई केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो र मैले सङ्गीतालाई पनि यो कुराको विश्वास दिलाएँ । बेलुका हामीले कोठामा नै खाना मगाएर खायौँ । हामीबीच सामान्य गफगाफ हुन थालेको थियो । अब परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प हामीमा थिएन । बेलुका सङ्गीताले आफ्नै बुबालाई मोबाइलबाट फोन गरी । हामी सुत्ने तरखर गर्न लाग्यौँ । उसले मोबाइल अफ गर्न बिर्सिछ । अचानक मोबाइल बज्यो । उसको उही व्वायफ्रेन्ड रहेछ । सुरुमा निकै मीठो गरी बोलिरहेको थियो । पछि त उसको हाँसेको डरलाग्दो स्वर परैबाट सुनिन्थ्यो । सङ्गीताको मुहार हेर्दाहेर्दै रङ्ग उडेको पातजस्तै भयो । उ नर्भस भएर केही बोल्न सकिनँ । मैले मोबाइल अफ गरिदिए । अब ऊ निकै नर्भस भई । मैले उसलाई अँगालोमा बाँधेर धेरैबेर सान्त्वाना दिईरहेँ । एउटा अविश्वासी केटासाथीबाट कसरी केटीहरूले प्रताडना पाउँदा रहेछन् मलाई सङ्गीताको निकै माया लागेर आयो । अब मैले आफूसहित कसरी सङ्गीताको ज्यान जोगाउने भनेर मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने थियो । सङ्गीता झस्कने–तर्सने गर्न थाली । यो बेला उसलाई धेरै सान्त्वाना र मायाको आवश्यक थियो । मैले उसलाई अँगालोमा बाँधेर सान्त्वाना दिई रहेँ । ऊ राम्ररी सुत्न पनि सक्दिनथी । यसरी एकअर्काको स्पर्शमा म ऊप्रति आकर्षित हुँदै गए ।
किन हो उसको शरीरबाट तिम्रो शरीरको जस्तै वासना आएको भान भयो मलाई । उसको आँखा, ओठ तिम्रो जस्तो देख्न थालेँ । ताजमहलमा तिमीलाई मैले चुम्बन गरेको सम्झेँ । मलाई आफैँलाई सही नसक्नु पीडा भयो । यो पीडामा कतिन्जेल बाँच्नु भोलि के हो मर्छु कि बाँच्छु ? आफ्नै जिन्दगीको कुनै भर छैन । मलार्ई लाग्यो तिमी नै मेरो अँगालोमा बाँधिएकी छौ । यो स्पर्श तिमीसँगको जस्तो लाग्यो । शरीरमा कुनै अनौठो तरङ्ग पैदा भयो मैले आपूmलाई सम्हाल्न सकिनँ । सङ्गीताले त आपूmलाई मप्रति पूरै समर्पित गरेकी थिई । एकातिर मगनी भइसकेको फेरि मजस्तो युवकलाई उसले कुनै नाइनास्तीमा स्वीकार्न राजी थिइ । फेरि अवस्था यति गम्भीर बनेको थियो कि हामी दुवै अन्य कुनै विकल्पमा जान सक्दैन्थ्यौ । यो अतृप्तीको ज्वालामा बाँच्नुभन्दा जीवनलाई तृप्तीको ज्वालामा होमेर मर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मैले सोचेँ । अब तिमीसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन । मैले मनमनै तिमीसँग माफी मागेँ । सङ्गीता र म कुनै नौलो संसारमा डुब्न पुग्यौँ । एउटा स्वर्गीय आनन्दमा हामी डुब्दै–उत्रदै ग¥यौँ । यसपछि ऊ निकै फ्रेस भई म पनि । हामीले सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने कसम खायौँ । मैले उसलाई जसरी भए पनि यो सङ्कटबाट मुक्त दिलाउने वचन दिएँ ।
तीन दिन तीन रात हामीले यस्तै गरी बितायौँ । अब भोलि बिहान हामी मुम्बई फर्कने बसको टिकट थियो । बिहान जाने बेलामा निकै सतर्क हुँदै हामी बसपार्क गयौँ । होटलवालाले ट्याक्सी बन्दोबस्त गरिदिएको थियो । हामी बसपार्क पुगेर गाडीमा चढ्यौँ । सङ्गीताले एकछिन टुवाइलेट जान्छु भनेर लेडिज ट्वाइलेटमा पसी म बाहिर सामान रुगेर बसेको थिएँ । सङ्गीता अब आउँछे भन्दै बाटो हेरिरहेँ तर आइन । निकैबेर भएपछि किन आइन भनेर आफैँ हेर्न गए तर ट्वाइलेटमा सङ्गीता थिइनँ म छाँगोबाट खसेजस्तै भएँ । अब के गर्ने कता जाने ? म ठूलो आपतको भुमरीमा परेँ । मलाई अनुमान लगाउन गारो भएन कि सङ्गीतालाई गुन्डाहरूले अपहरण गरिसके भनेर । विपतको ठूलो पहिरो ममाथि खस्यो । म सङ्गीतालाई माया गर्न थालेको थिएँ । मैले उसलाई संरक्षण दिन्छु भनेर खाएको वचन खोलामा बगेकोझैँ लाग्यो मलाई । म ठूलो बिस्मातको आँधीमा फसेर भावशून्य र विचारशून्य बनेको थियो । केहीसमयपछि मैले के गर्नुपर्छ भनेर बुद्धि लगाउन थालेँ । सर्वप्रथम मैले उसको बुवालाई खबर गर्नुपर्ने विचार गरेँ । त्यसपछि पुलिसस्टेसन गई उसको बारेमा जानकारी दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेँ । उसको बुबालाई उसको बारेमा जानकारी दिएँ । उनी निकै नर्भस भएर तुरुन्त गोवा आउने खबर पठाए । म पुलिसस्टेसन गएर सङ्गीताको बारेमा रिपोर्ट लेखाएँ । गोवा आएपछिको घटनाको सविस्तार इन्स्पेक्टरलाई बताएँ । पुलिसले ज्यानसम्बन्धी मामला भएको हुनाले उसको बुबा नआउन्जेल पुलिसस्टेसनमा नै मलाई बस्नुपर्ने वाध्यता देखायो । मसँग अरू उपाय केही थिएन । सङ्गीताको बुबा आउन्जेल म पुलिसस्टेसन बस्ने भएँ । पुलिसस्टेसनमा एकातिर मलाई धेरै कुराको अभाव भएको थियो भने अर्कोतिर सङ्गीताको बिछोडले म पीडित बनेको थिएँ । भोलिपल्ट सङ्गीताको बुबा आए । उनी आफूमाथि परेको घटनाले निकै उदास थिएँ । उनले ममाथि नै शङ्का गरेका रहेछन् । मलाई पुलिस स्टेसनमा देखेपछि केही सामान्य बनेँ । मसँग केही बोलेनन् । पुलिस इन्स्पेक्टरसँग खै के गोप्य वार्ता गरे मैले थाहा पाउन सकिनँ । उसले पुलिस इन्स्पेक्टरसँग नै मैले दिएको बयानबाट सबै कुरा थाहा पाइसकेका थिए । उसले आफ्नो साथमा एकजना आफन्त पनि ल्याएका थिए । ती आफन्तलेचाहिँ मसँग सामान्य गफ गरेँ । मैले सबै कुरा सबिस्तार सुनाएँ । दिनभर यस्तै छलफलमा नै पुलिस स्टेशनमा बित्यो । मैले पुलिस इन्स्पेक्टरलाई आफूबाहिर होटलमा बस्ने बिचार पोखेँ । उनले मलाई बाहिर बस्दा मेरो ज्यान पनि खतरामा पर्छ भनेर बस्न दिएनन् । मैले पनि होला बाहिरभन्दा म यहीँ सुरक्षित छु भन्ने सोचेँ । मैले मेरो घरमा जानकारी दिन आवश्यक ठानिनँ किन कि मेरा बुबा निकै वृद्ध भइसकेका थिए भने आमा रोएर ज्यान दिनुहोला भन्ने पीर लाग्यो फेरि यसमा मेरो कुनै कसुर पनि थिएन । म त निर्दोष छँदै थिएँ । पक्कै पनि मेरो संलग्नता नभएपछि मलाई चाँडै छोडि दिनेछ भन्ने लाग्यो । आजभन्दै भोलि भन्दै हप्ता दिन बित्यो सङ्गीताको कुनै पत्तो लागेन । पुलिसले खोजतलास निकै सक्रिय बनाएको थियो । सङ्गीताको बुबा दिनमा एकपल्ट पुलिस स्टेशन आउँथे र रोएर बिलौना गर्दथे । मसँग खासै केही बोल्दैनथे । उनका आफन्त उनलाई निकै सम्झाउँदथे । यसो गर्दै दस दिनपछि सङ्गीताको पत्तो लाग्यो तर ऊ मृत्त अवस्थामा भेटिइ । मलाई ठूलो आघात प¥यो । मैले सोच्तै नसोचेको घटना घट्तै गएको थियो । सङ्गीताको पत्तो लागेपछि मलाई पुलिसले छोड्छन् भन्ने ठूलो आशा थियो तर मलाई त शङ्का गरेर इन्स्पेक्टरले त्यहीँ राख्ने भए । मलाई जेल चलान गर्ने कुरा भइरहेको थियो । कताबाट एक जना सरकारी वकिलले मेरो जमानत गराए । ती वकिल मलाई भेट्न आए । मलाई अचम्म लाग्यो ती वकिल त मसँग सानोमा मुम्बईमा सँगै पढ्ने साथी पो रहेछन् । धेरै वर्षपछि हामी साथी–साथीको भेट हुँदा मलाई निकै खुसी लाग्यो र अब आपूm यो भुमरीबाट निस्कन्छु भन्ने विश्वास लाग्यो । पुलिस स्टेशनबाट बाहिर आए पनि मैले सहर छोड्न नपाउने भएँ । मेरो साथीले आफ्नो जमानतमा मलाई बाहिर ल्याएका थिए र उसैले फेरि एउटा होटलमा मेरो जागिर मिलाइदिए । अब सङ्गीताको हत्या किनारा नलागुन्जेल मैले गोवा छोड्न नपाउने भएँ । यसबीचमा तिमीलाई खबर गर्ने मन थियो तर मेरो मुद्दा टुृगो लागेपछि मात्र तिमीसँग मेलमा सम्पर्क राख्ने सोचाइ मैले बनाएँ । सङ्गीताको मुद्धा किनारा लागुन्जेल झन्डै छ महिना बितिसेकेको थियो । अहिले सङ्गीताको मुद्धा टुङ्गो लाग्यो । उसको अपराधीको पनि पत्तो लाग्यो । अब मलाई यो मुम्बई र गोवामा बस्न कुनै इच्छा भएन । अब चाँडै तिमीलाई भेट्न म काठमाडौँ आउँदैछु । मलाई तिम्रो त्यो हृदयमा ठाउँ दिन्छ्यौ कि दिँदैनौ ? यही बुझ्न मलाई इच्छा छ । यदि तिम्रो हृदयमा मेरोलागि पहिलाको जस्तै खाली छ भने म तिमीलाई चाँडोभन्दा चाँडो भेट्न आउनेछु । नत्र यता कतै जागिर खोजेर बस्नेछु ।
प्रिय हिमशिखा तिमीले मलाई चाँडोभन्दा चाँडो मेरो जबाफ दिनेछौ भन्ने पखाइमा छु ।
उही तिम्रो प्रिय गौरव